स्वास्थ Archives - Page 20 of 25 - Dna Nepal
निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा ६ सय जनाको स्वास्थ्य परिक्षण २६ जेष्ठ २०७५, शनिबार १३:४९
पोखरा, जेठ २६ । मार्फा थकाली युवा सञ्जाल र मार्फा थकाली महिला समितिले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षणमा ६ सय जना लाभान्वित भएका छन् । पोखरा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. को प्राविधिक सहयोगमा मार्फा थकाली समाज..
मिट टाउनको रक्तदानमा २७ यूनिट रगत संकलन १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १२:३३
पोखरा, जेठ १७ । लायन्स क्लब अफ पोखरा मिड टाउनले बिहिबार पोखरामा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा २७ यूनिट रगत संकलन भएको छ । क्लबका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षता तथा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष रुद्रनाथ बरालको..
चट्याङ किन पर्छ ? कसरी जोगिने ? १४ जेष्ठ २०७५, सोमबार १६:११
एजेन्सी, जेठ १४ । प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा चट्याङ लागेर धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । प्रायजसो न्यानो महिनाहरुमा बिजुली चम्किने र मेघ गर्जनसहित चट्याङ पर्ने गर्छ । चट्याङको बारेमा हामीले धेरै मिथकहरु सुन्दै आएका छौं । जस्तैः चट्याङ सधैं..
मनिपाल अस्पताल खुलाउन मुख्यमन्त्री गुरुङ्को निर्देशन
पोखरा, जेठ १४ । एकसाता अघिदेखि बन्द भएको पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पताल खुलाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मनिपाल शिक्षण अस्पताल तुरुन्त खुलाउन निर्देशन दिएका छन् । अस्पतालजस्तो ईमरजेन्सी सेवामा..
‘स्वस्थ हुन स्क्रिनिङ टेस्ट गरौं’ ५ जेष्ठ २०७५, शनिबार ११:३१
पोखरा, जेठ ५ । सन्तुलित भोजन, व्यवस्थित जीवनशैलीसँगै स्वस्थ हुन रोग लागेको आशंका भएमा र स्वस्थ भए पनि समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्वस्थ्यबारे जनचेतना र सेवा, सुविधा जनस्तरसम्म फैलिँदै गए पनि रोगको मुख्य कारण लापरवाही र..
हेमजामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न १४ बैशाख २०७५, शुक्रबार १२:३१
हेमजा, बैशाख १४ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वाड न. २५ हेमजामा स्थीत बहुउदेश्यी कृषि सहकारी सस्थाको नवनिर्मित आलु भण्डार गृह उद्घाटन तथा कृषि पसल शुभारम्भको उपलक्ष्यमा शुक्रबार पोखरा २५ हेमजामा बहुउदेश्यी कृषि सहकारी सस्था तथा नेपाल रेडक्रस..
उपचारमा बालकको मृत्यु भएपछि पश्चिमाञ्चल अस्पतालमा तनाव २२ चैत्र २०७४, बिहीबार १३:१८
पोखरा, चैत २२ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान पोखरामा उपचारकाक्रम एक बालकको मृत्यु भएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका ५ पर्स्याङ बस्ने संगिता परियारको छोरा साढे २ बर्षको छोरा रोहित परियारको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । ज्वरो आई..
मणिपाल आन्दोलन लाठीचार्जबाट ३ कर्मचारी घाइते (फोटो फिचर) १९ चैत्र २०७४, सोमबार ०६:१८
पोखरा, चैत १९ । पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरीको लाठीचार्जबाट ३ कर्मचारी घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरुमा राजबहादुर घर्ती कर्णबहादुर के.सी. र अमर गुरुङ हुन्। उनिहरुलाई घाँटी तथा टाउकोमा चोट लागेको छ। दर्जन भन्दा..
पोखराको मनिपाल अस्पतालमा झडप
पोखरा, चैत १९ । पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । १० महिनाअघि देखि तलव र सेवा सुविधा बृद्धीको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले केही सातायता प्रदर्शन गरेका थिए । तलवको १० प्रतिशत घरभाडा बापतको..
पानी कति पिउने र कसरी पिउने ? १८ चैत्र २०७४, आईतवार ०१:०७
डा. रबिनलाल श्रेष्ठ पानी र जीवनको गहिरो सम्बन्ध भएझैँ पानी र स्वास्थको पनि गहिरो सम्बन्ध छ । पानीको मात्रा, पिउने समय र पिउने तरिकाले स्वास्थ्य लाभ वा हानीको निर्धारण गर्दछ । हाम्रो शरीरको २र३ भाग पानीले बनेको हुन्छ । पानी बिना शरीर भित्रका कुनै..